Written by Administrator	Monday, 20 February 2012 17:34	Share
ယဉ်ကျေးမှုသူတို့အတွက် ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဟာငါ့အတွက်တော့ မဟာတံတိုင်းကြီးသာယာညင်းပျောင်းမှုလေပြည်ကအခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ဆုတ်ခွာလို့တစ်ခါလောက် အောင့်နမ်းတဲ့သူကိုသက်ဆိုင်ရာက ချီးမြှောက်တော်မူ၏ပဲudden numbness or weakness especially somewhere with the body, sudden severe headache, slurred speech, difficulty with vision or balance buy cialis online online. Cialis is reallyaphosphodiesterase type PDE inhibitor Even though the clinical relevance on this observation is unknown,apotentially increased risk of anginal attack during the nitrate free interval should be thought about cialis 2013. argaiv1560
အဲဒီ သေနေတဲ့ စာအုပ်တွေကို မဖတ်ချင်လို့အဲဒီငြီးငွေ့စရာ လက်ချာတွေကို မသင်ချင်လို့ပေါင်မုန့်တစ်ဖဲ့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေကို ပွဲထုတ်လို့မျက်မမြင် နှလုံးသားကို မမြင်အောင် ကြည့်တယ်။တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကို အိပ်မက်ကအနိုင်ယူ စိတ်ကူးဆိုတာကလည်း လူသားတိုင်းအတွက်ပေါ့ဆောင်းမနက်ခင်းရဲ့ နေခြည်နွေးနွေးနဲ့အတူအိပ်မက်တွေ ပိုချိုမယ်ထင်ရဲ့ကမ်္ဘာကြီးသာ တကယ်လည်နေတယ်ဆိုရင်ဆွဲအားမဲ့စွာငါ့အပေါ် ကျလာမှာတွေငါကျသွားမယ့် အပေါ်တွေကို ကျော်ကြည့်လို့ ခုတော့ကျည်ဆန်ရထားပေါ်တက်သွားလေရဲ့။ သုစံ၊ရွှေလှော်သား၊
အိမ်ကလေးရယ်မောသံတွေ ဆူညံခဲ့လို့ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ဖုံးလွမ်းသာယာမှုတွေ ပေးစွမ်းခဲ့တဲ့အိမ်ကလေး။စိမ်းညို့သစ်ပင်တွေနဲ့ စိုပြည်လို့အေးမြတဲ့ သစ်ရိပ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းခဲ့တဲ့အိမ်ကလေး။အခုတော့အော်ဟစ်သံတွေနဲ့ ဆူညံလို့ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးပူလောင်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပြီအိမ်ကလေးရယ်။စိမ်းညို့တဲ့ သစ်ပင်တွေကြောင့်စိတ်ကြည်လင်မှု မရခဲ့သလိုအေးမြတဲ့ သစ်ပင်ရိပ်ကြောင့်ငါ့ရင်တွေ မအေးမြနိုင်တော့ဘူးအိမ်ကလေးရယ်။ဟိုအရင်ချိန်ကလို သာယာငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ရယ်မောခဲ့တဲ့ အရာတွေဘယ်ဆီမှာလဲအိမ်ကလေးရယ်။ ။
အကြည့်တစ်ခါ ငါ့ရင်လွှာကိုဝင်လာရိုက်ချိုး နင်စိုက်ပျိုးတယ်နှောင်ကြိုးသစ်ပင် ရစ်တွယ်ငင်၍ရင်ကိုရိုက်ခတ် မုန်တိုင်းထစေအပြုံးတွေစူး ရင်မှာရူးမိသူမသိလည်း တွယ်ငြိမြဲစွာအကြင်နာဖြင့် ရင်မှာပွင့်သည်တစ်ပွင့်ထိုပန်း မညှိုးနွမ်းခင်အနမ်းခြွေပါ ငါ့သခင်။ ။
နားကိုစုံပိတ်ထားလည်းမဖြစ်မနေလိုကြားနေရဂါဇာမှာ ဘယ်လောက်ပါကစ်္စတန်မှာ ဘယ်လောက်ဂျပန်မှာ ဘယ်လောက်ထိကြ၊ ခိုက်ကြ၊ သေဆုံးကြ။နားကိုစုံပိတ်ထားလည်းမဖြစ်မနေမို့ ကြားနေရဆီဈေး ဘယ်လောက်ဆန်ဈေး ဘယ်လောက်အသားဈေး ဘယ်လောက်တက်နေ၊ တိုးနေ၊ ၀ယ်နေရ။
ကျွန်တော် မစဉ်းစားတော့ဘူးမစဉ်းစားဘူး အဖေအမှားအယွင်းက မိသားစုထဲမှာ မျက်ရည်ဥခဲ့ရတဲ့ ညတွေပဲနမူနာယူဖို့ သက်သေပြခဲ့တာအပုပ်အသိုး ကိုယ်ကျင့်တရားတွေပဲမစဉ်းစားဘူး အဖေကေသရာဇာလို စိတ်ဟာ မြင့်မြတ်မှုနဲ့ကင်းဝေးနေလို့နောက်ကွယ်မှာ (ကျွန်တော်) မြက်စားတာမကြာခဏပဲအနန္တဂိုဏ်းဝင်ထဲမှာ အဖေဆိုတဲ့ အရှိတရားကအိမ်တစ်လုံးရဲ့ “ခေါင်”ဆိုတဲ့အမည်ပညတ်ချက် မဟုတ်လားမစဉ်းစားဘူး အဖေနေ၀င်ခါနီးမှ မှောက်မှားရတယ်လို့ချောက်ချားနေရတဲ့ သားတို့ ဘ၀တွေအကြောင်းဟန်ဆောင်ဝတ်ရုံတစ်ခုအောက်က အမေ့ သံယောဇဉ်တွေအကြောင်းတိတ်တိတ်ကလေးပဲ မျိုချထားမယ်မစဉ်းစားဘူးအဖေတကယ်ပါ....ကျွန်တော် မစဉ်းစားတော့ဘူး။ ။
We have 241 guests online	and views	© 2008-2010 Shweamyutay.com. All rights reserved.